Xukuumada federaalka oo ku eedaysay Al-shabaab in ay bar-tilmaameedsanayso barakacayaasha. – Radio Daljir
Muqdisho, Feb 21 – Dhaqdhaqaaqa argagixisada ah ee Al-shabaab (Alqaacidada Soomaaliya) ayaa billaabay beegsiga xeryaha barakacayaasha, kadib markii ay awoodi waayeen in ay ka horyimaadaan Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Midowga Afrika.
Shalay oo Isniin ahayd ayey argagixiyaashu qarax la beegsadeen xerada barakacayaasha ee Badbaado oo ah xerada ugu weyn Soomaaliya oo ku taalla degmada Dharkeenley ee Muqdisho, waxaana uu sababay dhimashada hal qof iyo dhaawaca dhowr kale oo rayid ah.
Qaraxa waxaa si toos ah loola beegsaday barakacayaal aan awood u lahayn in ay naftooda ka difaacaan weerarrada argagixisada.
Kusimaha Wasiirka warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta Mudane, Ahna Wasiir ku xigeenka Mudane C/llaahi Bile Nuur oo Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya ee (SONNA) la hadlay ayaa yiri ?kadib markii ay dhowr jeer oo hore ay ku fashilmeen in ay laayaan shacabka reer Muqdisho, howlaha la dagaallanka argagixisada oo ay Nabadsugidda Qaranka wado owgeed, Al-shabaabka Al-qaacidada u xuubsiibtay waxa ay u muuqdaan kuwo isku dayaya in ay weeraraan barakacayaasha ay dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka taakuleeyaan si noloshooda loo badbaadiyo?.
Wasiirku waxa uu intaas ku daray ?Hadii aysan nolosha dadka taagta daran ee Soomaaliyeed aysan ixtiraameynin tolow marka xiga ayey beegsan doonaan??!!?.
Wasiirka ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay ?Xukuumadda Soomaaliya waxa ay eedeyneysaa falkii waxashnimada ahaa oo ay ku kacday Argagixisada Al-shabaab, waxa ayna u tacsiyeyneysaa qoysaskii ay dadkaasi ka geeriyoodeen, Allena waxa ay uga baryeysaa in uu dhaawacyada caafimaad degdeg ah siiyo. Xukuumadda Soomaaliya waxa ay ku dadaaleysaa ammaanka xerayaha barakacayaasha, iyada oo kordhineyso tirada ciidamada Booliska ah si loo badbaadiyo nolosha dadka halkaasi ku nool ?.